မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားတော်များ အားထုတ်ကျင့်ကြံမှသာ သာသနာတော် အဓွန်.ရှည်မည်ဖြစ်၏
"သင်္ခါရသဘောတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကြသည်၊သင်ချစ်သားတို့ မမေ့မလျှော့သော သတိတရားတို့ဖြင့် အားထုတ်ကြကုန်လော့(မြတ်စွာဘုရား၏ နောက်ဆုံးအဆုံးအမ) "
"လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်တစ်ရာနေရပေမယ့် ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အဖြစ် အပျက်ကို မမြင်ဘူး (မသိဘူး)ဆိုရင် မမြတ်ဘူးတဲ့၊ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်တည်းနေရပေမယ့် ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ရတယ် (သိတယ်)ဆိုရင်တော့ မြင့်မြတ်ပါတယ်တဲ့"
English တရားဓမ္မစာအုပ်များ အသံဖိုင်များ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ
Posted by Kyaw81 at 6:36 AM0comments
ကံဥာဏ်ဝီရိယစွမ်းအင်များ၊ ဖန်ဆင်းရှင်လို့မှတ်စေသား - တဲ့။
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်- ရွှေပြည်သာ)
Posted by Kyaw81 at 8:08 PM0comments
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္မဌာန်းသံပေါက် လင်္ကာများ
၁။ သဗ္ဗေသတ္တာ၊ ဝေနေယျာ၊ သံသာရှည်လှပြီ။
၂။ အတည်ကျကျ၊ ဘယ်ဘ၀၊ ရကြမရှိပြီ။
၃။ ရအံ့နိုးနိုး၊ လောဘမျိုး၊ အကျိုးယုတ်လှပြီ။
၄။ သုံးပါးညီးညီး၊ လောင်မီးကြီး၊ ဖိစီးလှလေပြီ။
၆။ ပိုးဖလံမျိုး၊ မီးကိုတိုး၊ ကိုယ်ကျိုးနည်းလှပြီ။
၇။ ကာမဂုဏ်မွဲ၊ သည်မိုက်ခဲ၊ မခွဲနိုင်ကြပြီ။
၈။ မခွဲနိုင်ကြ၊ လူ့ဗာလ၊ မိုက်စသိမ်းသင့်ပြီ။
၁၀။ များအသင်္ချေ၊ ရှင်စောထွေ၊ ရှောင်သွေလွဲခဲ့ပြီ။
၁၁။ တစ်ဆူမသင့်၊ တစ်ဆူသင့်၊ ဖူးခွင့်တွေ့ထိုက်ပြီ။
၁၂။ မတော်မတရား၊ ကျင့်ဖောက်ပြား၊ မိုက်အားကြီးလှပြီ။
၁၃။ အလိုမလိုက်၊ သည်အမိုက်၊ ပယ်ထိုက်သင့်လှပြီ။
၁၄။ မပယ်မချိုး၊ ဆင်ကန်းတိုး၊ ဟုတ်နိုးထင်လှပြီ။
၁၅။ ဟုတ်နိုးသမှု၊ ထင်တိုင်းပြု၊ ယခုတိုင်ခဲ့ပြီ။
၁၆။ တရားလက်လွတ်၊ ငှက်တောင်ကျွတ်၊ ၀ဋ်နှင့်မကင်းပြီ။
၁၈။ အရတော်စွ၊ သည်ဘ၀၊ လှလှကျင့်ထိုက်ပြီ။
၁၉။ ကြုံကြိုက်တော်စွာ၊ သာသနာ၊ ရောင်ဝါထွန်းလှပြီ။
၂၀။ သတိရရ၊ မြတ်ပုည၊ ပြုရကောင်းသင့်ပြီ။
၂၁။ တစ်နေ့တစ်နေ့၊ နက်ဖြန်ရွေ့၊ မမေ့ကောင်းသင့်ပြီ။
၂၃။ ထင်မှားတတ်စွာ၊ သက္ကာယာ၊ မိစ္ဆာကင်းသင့်ပြီ။
၂၄။ ငါးခုခန္ဓာ၊ ရုပ်နမ်မှာ၊ မှန်စွာ မှတ်သင့်ပြီ။
၂၅။ သမ္မသန၊ ဥာဏ်အစ၊ ထင်လှသင့်ကြပြီ။
၂၆။ နင်ဖြင့်နင့်ကိုယ်၊ ဆုံးမယဆို၊ နင့်ကိုယ်အမှုသည်။
၂၈။ နှလုံးဖုံဖုံ၊ ထုံတုံတုံ၊ နင့်ပုံကြော့ကြမ်းသည်။
၂၉။ နင်နှင့်နင့်ကံ၊ စီရင်ဖန်၊ အမှန်ဖြစ်တော့သည်။
၃၀။ ယခုနင့်ကိုယ်၊ နင့်အလို၊ ဘယ်ကိုပြည့်စုံသည်။
၃၁။ နင့်ကိုယ်နင်နှစ်၊ နင့်အပြစ်၊ နင်ဖြစ်ခံရမည်။
၃၂။ နင့်ကိုနင့်အား၊ နင်မသနား၊ နင်မှားရှာတော့သည်။
၃၃။ ဒါနသီလာ၊ ဘာဝနာ၊ နင်သာပြုသင့်သည်။
၃၅။ မျက်တောင်တစ်ယှက်၊ လျှပ်တစ်ပြက်၊ နင့်သက်သေလိမ့်မည်။
၃၇။ ကြီးငယ်မဟူ၊ ကိုယ့်ရွယ်တူ၊ ခုမူသေလှပြီ။
၃၈။ အမှန်သေရိုး၊ ထိုလူမျိုး၊ ကြောက်စိုးရွံ့သင့်ပြီ။
၃၉။ မသွင်းနှလုံး၊ အထင်ရှုံး၊ ပျက်ပြုန်းလှလေပြီ။
၄၀။ ခန္ဓာကြွေလျော်၊ ရှိပြန်သော်၊ ပူဇော်ကောင်းလှပြီ။
၄၁။ သွားကျိုးဆံဖြူ၊ ရှိပါမူ၊ ဘယ်သူမကြောက်ပြီ။
၄၃။ ခယ၀ယ၊ ဘိဇ္ဇန၊ ပျက်ကြလှလေပြီ။
၄၄။ အပ္ဗိယေဟိ၊ ပိယေဟိ၊ ဒုက္ခိကြုံလေပြီ။
၄၆။ နိဗ္ဗာန်သာခေါင်၊ ဘေးမဲ့သောင်၊ ရောက်အောင်ပြုသင့်ပြီ။
၄၇။ မပြုပါဘဲ၊ နင်ရှောင်လွဲ၊ နင်ပဲမိုက်လှသည်။
၄၉။ ဘုရားသွားသွား၊ ကျောင်းသွားသွား၊ စိတ်ထားနင်မကြည်။
၅၀။ ဒါနသီလာ၊ နင်ပြုခါ၊ စေတနာဇောမကြည်။
၅၁။ သို့ပင်ပြုလို၊ နင့်ကုသိုလ်၊ ဘယ်ကိုသွားလိမ့်မည်။
၅၂။ လောကုတ္တရာ၊ မြိုက်သြဇာ၊ နင်သာဝေးလှသည်။
၅၃။ ဇောစိတ်သန်သန်၊ ကုသိုလ်မှန်၊ နင်ကြံပြုရမည်။
၅၄။ သို့ပြုမှသာ၊ သည်ခေမာ၊ နင်သာနီးရမည်။
၅၅။ ဤသို့စုံစေ့၊ ပြန်လှန်၍၊ စေ့စေ့နှလုံးတည်။
၅၇။ ဂင်္ဂါဝါဠု၊ ပမာပြု၊ သဲစု မကပြီ။
၅၉။ တဏှာမြစ်မ၊ ပင်လယ်ဝ၊ နစ်ကြလေကုန်ပြီ။
၆၀။ တဏှာလည်းပွား၊ ဒုက္ခများ၊ သွား၍မဆုံးပြီ။
၆၂။ သေမင်းနိုင်ငံ၊ အဖန်ဖန်၊ လိုက်ပြန်ရလေပြီ။
၆၃။ ဝေဘူတောင်မျှ၊ ပမာပြ၊ အရိုးမကပြီ။
၆၄။ နစ်တုံပေါ်တုံ၊ သုံးပါးဘုံ၊ ကြုံပြန်ရလေပြီ။
၆၆။ အ၀ိဇ္ဇန္ဓ၊ သည်မောဟ၊ ညှဉ်းဆဲလှပေပြီ။
၆၇။ နီဝရဏ၊ ဆီးတားကြ၊ လမ်းစ မဆုံးပြီ။
၆၉။ ဘ၀တိုင်းသေ၊ သင်္ချိုင်းမြေ၊ ပွားစေလှလေပြီ။
၇၀။ လမ်းကောက်လည်းသွား၊ လူအများ၊ အမှားကြိုက်ခဲ့ပြီ။
၇၁။ လမ်းကြောင်းမမှန်၊ မြတ်နိဗ္ဗာန်၊ ဧကန်လွဲခဲ့ပြီ။
၇၂။ ဘ၀မဆုံး၊ ဒုက္ခတုံး၊ လုံးလုံး ခံရပြီ။
၇၃။ လောကမျက်ရှူ၊ သဗ္ဗညု၊ ယခုရှိရဲ့ မင်း။
၇၄။ ဘုရားဖြစ်ခါ၊ သာသနာ၊ ရောင်ဝါတ၀င်းဝင်း။
၇၅။ မနုဿတ္တ၊ ဒုလ’ဘ၊ ရအောင်ခဲကြမင်း။
၇၆။ ဗြဟ္မာ့ပြည်က၊ အပ်ကိုချ၊ မြေကအပ်တစ်စင်း။
၇၇။ အပ်သွားချင်းသာ၊ ထိဖွယ်ရာ၊ ပမာမှတ်ကြမင်း။
၇၈။ နိယျာနိက၊ မြတ်ဓမ္မ၊ ကြားရခဲ၏မင်း။
၇၉။ သဒ္ဓါဗလ၀၊ ဒုလ’ဘ၊ ရအောင်ခဲကြမင်း။
၈၀။ အရတော်ခိုက်၊ လူတစ်ဝိုက်၊ ခဲလိုက်ကြကုန်မင်း။
၈၁။ ကိုယ့်ဖို့မရ၊ သည်နောင်တ၊ ဖြစ်တတ်ကြ၏မင်း။
၈၂။ ဤသို့ဘ၀၊ ဖြစ်သမျှ၊ ရမည်ခဲ၏မင်း။
၈၃။ ထူးမြတ်စွာလှ၊ လူ့ဘ၀၊ နှမြောကြကုန်မင်း။
၈၄။ မြတ်သည်ကိုမှ၊ မသိကြ၊ ဗာလနှလုံးသွင်း။
၈၅။ ဗာလဖြစ်က၊ လူ့ပါပ၊ ကြာကြကုန်ပြီမင်း။
၈၆။ လူဖြစ်ကျိုးမှ၊ မခံရ၊ ရှူံးလှချေ၏မင်း။
၈၇။ ဘ၀တိုင်းရှူံး၊ လူ့ကျောက်တုံး၊ စုန်းစုန်းမြုပ်၏မင်း။
၈၈။ စုန်းစုန်းမြုပ်ခါ၊ မပေါ်လာ၊ ကြမ္မာမှောက်၏မင်း။
၈၉။ နိဗ္ဗာန်လမ်းစ၊ ဤသို့ပြ၊ မှတ်ကြနှလုံးသွင်း။
၉၀။ ကလျာဏမိတ္တ၊ ပဏ္ဍိတ၊ ပေါင်းဖော်ရ၏မင်း။
၉၁။ ထိုကလျာဏ၊ ဆိုဆုံးမ၊ လိုက်နာရ၏မင်း။
၉၄။ အလောဘ အဒေါသ အမောဟ နိက္ခမ ၀ိဝေက နိဿရဏ၊ ဤခြောက်ဝ၊ အလိုရှိကြမင်း။
၉၅။ ရွှေပြည်သနစ်၊ သာသည့်ခေတ်၊ စိစစ်ကြကုန်မင်း။
၉၆။ ရွှေပြည်ချမ်းသာ၊ စံချင်ရှာ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ချဉ်း။
၉၇။ အနိစ္စကောင်၊ ဒုက္ခကောင်၊ အနတ္တကောင်၊ အသုဘကောင်၊ ထင်အောင် နှလုံးသွင်း။
၉၈။ အနိစ္စတုံး၊ ဒုက္ခတုံး၊ အနတ္တတုံး၊ အသုဘတုံး၊ လုံးလုံး နှလုံးသွင်း။
၉၉။ ဤသို့ထင်မှ၊ မဂ်လမ်းစ၊ ရမည်မှတ်စင်းစင်း။
၁၀၀။ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီး၊ တက်၍စီးမှ၊ ပြည်ကြီးအမတ၊ နိရောဓ၊ ရမည်မှတ်ကြမင်း။
၁၀၁။ ယခုဘ၀၊ မသိကြမူ၊ အမတမည်ခေါ်၊ ရွှေပြည်တော်၊ အစော်မနံလျှင်း။
အရတော်စွ ၊ သည်ဘ၀ ၊ လှလှကျင့်ထိုက်ပြီ ။
ကြုံကြိုက်တော်စွာ ၊ သာသနာ ၊ ရောင်ဝါထွန်းလှပြီ ။
သတိရရ ၊ မြတ်ပုည ၊ ပြုကြကောင်းသင့်ပြီ ။
တနေ့ တနေ့ ၊ နက်ဖြန်ရွေ့  ၊ မမေ့ ကောင်းသင့်ြ့ပီ ။
( ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော် )
ငါ့ကိုယ် ငါ့သား ၊ ငါ့မယား ၊ ထင်မှားလှလေပြီ ။
ထင်မှားတတ်စွာ ၊ သက္ကာယာ ၊ မိစ္ဆာကင်းသင့်ပြီ ။
ငါးခုခန္ဓာ ၊ ရုပ်နာမ်မှာ ၊ မှန်စွာမှတ်သင့်ပြီ ။
သမ္မသန ၊ ဉာဏ်အစ ၊ ထင်လှသင့်ကြပြီ ။
Posted by Kyaw81 at 12:08 AM0comments
၀ိပဿနာ ညစ်ညူးကြောင်း ဆယ်မျိုး
၀ိပဿနာ ညစ်ညူးကြောင်း ဆယ်မျိုးကို ပဏ္ဍိတဝေဒနီယကျမ်းနောက်မှ ရေးသားသော အဘိဓမ္မတ္တသရူပဒီပနီ ကျမ်း၌ ပို၍ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်။
၁။ သြဘာသ = အရောင်အလင်း၊
၂။ ပီတိ = အလွန်ပီတိဖြစ်ခြင်း၊
၃။ ပဿဒ္ဓိ = ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အလွန်အေးငြိမ်းနေခြင်း၊
၄။ အဓိမောက္ခ = အလွန်ကြည်လင်၍ သဒ္ဓါဖြစ်ခြင်း၊
၅။ ပဂ္ဂဟ = အလွန်ဝီရိယ မျှတခြင်း၊
၆။ သုခ = အလွန်ရွှင်လန်း ချမ်းသာခြင်း၊
၈။ ဥပဋ္ဌာန = အလွန် သတိထင်ခြင်း၊
၉။ ဥပေက္ခာ = ဥပေက္ခာ အားကောင်းခြင်း၊ (ဟန်ချက်ညီခြင်း)
၁၀။ နိကန္တိ = (ယင်းသို့ ဖြစ်ရသည်များကို) နှစ်သက်သာယာခြင်း။
အထက်ပါဆယ်မျိုးတွင် အရောင်အလင်း နှင့် စပ်၍ ဤသို့ မှတ်ချက် ပေးတော်မူ၏။
အရောင်သြဘာသကား ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ မဖြစ်။ ဈာနလာဘီ သမာဓိ ကြီးထွားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ဖြစ်တတ်၏။ သူတစ်ပါး မမြင်ရဘဲ မိမိသာ ဖြင်ရသော စိတ်ကြည် စိတ်လင်း၊ ဥာဏ်ကြည် ဥာဏ်လင်း အရောင်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ သူတစ်ပါးတို့ပါ မြင်ကောင်း လောက်အောင် ကိုယ်ရောင်လည်း ထွက်တတ်၏။
Posted by Kyaw81 at 11:46 PM0comments
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရား၏ ဖိုလ်စိတ်အကြောင်း ရှင်းလင်းချက်
ဖိုလ်ဝင်စားတာ ထိုင်ရပ်လည်းဝင်စားနိုင်တယ်၊ ရပ်ပြီးလည်းဝင်စား နိုင်တယ်၊ လမ်းလျှောက်ပြီး လည်းဝင် စားနိုင်တယ်၊ လဲလျောင်းပြီးလည်း ၀င်စားနိုင်တယ်။တခြားစိတ်တွေမဖြစ်ပဲ ဒီဖိုလ်စိတ်နဲ.တစိတ်ပြီး တ စိတ် ဆက်ပြီးဖြစ်တာကို ဖိုလ်ဝင်စားတယ်ခေါ်တယ်။
ုအပ္ပာနာဇောများသည် ဣရိယာပုတ်ကိုလည်း ထောက်ပံ.ခိုင်ခံစေ၏ဒီလို ရှေ.ကနိသာယ ပြန်ခဲ.တယ်။အဲဒီမှာ အပ္ပာနာဇောများသည် ဣရိယာပုတ်ကိုလည်း ထောက်ပံ.၏ဟုဒီလိုကလေးများအနက်ပြန်ခဲ.ရင် ပိုဟန်ကျ မယ်လိုထင်ပါ၏။ အဲဒီမှာ အပ္ပာနာဇောများသည်ဣရိယာပုတ်ကိုလည်းပဲ ဆိုသည်.စကားဖြင်.စိတ်ကြောင်. ဖြစ်သော ရုပ်ရိုးရိုးကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။လျောင်းသောအခြင်းအရာ၊ ထိုင်သောအခြင်းအရာ၊ ရပ်သောအခြင်း အရာ၊ သွားသောအခြင်းအရာတွေနှင်.စိတ်အထူးထူးကိုဖြစ်စေတယ်။ ဣရိယာပုတ်တွင် ကြာကြာနေနိုင်အောင်
အဲဒီမှာ ထောက်ပံခိုင်ခံစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ. အဲဒီစကားကိုယူပြီးတော. ဖလသမာပတ်နှင်.ပတ်သတ်ပြီးသော အလွဲလွဲ အချော်ချော်တွေကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ပံခိုင်ခံစေ ၏်ဆိုသော နိသာယ ဆရာတော် ကြီးများ၏အနက် ကိုကြည်.ပြီးတော. တချို.ဘာဖြစ်တယ်မဆိုနိုင်ဘူး၊ တခါတည်းမလှုပ်မရှပ်ပဲ ထိုင်နေတာတွေ အဲဒါကို ဖလသမာပတ်ဝင်စားတယ်လိုယနေ.လောက တချို.တချို.ဌာန တွင် သမုတ်ကြတယ်၊ပြောကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။တချိန်ကအဲဒီလိုဖလသမာပတ် ၀င်စားတယ်ဆိုတဲ. သူငယ်ကလေးတယောကိုတွေ.ဘူးတယ်။ အဲဒီသူငယ်လေးရဲ.ဆရာတော်က ကိုယ်တော် ဒီကလေးကိုကြည်.စမ်း၊ ဟေ.ကောင်မင်း ဖလသမာပတ်ဝင်စား ပြလိုက်စမ်းလို သူ.ဘုန်းကြီးကပြောတာပဲ။အဲဒီ အခါကျတော. ကလေးက ပကတိ မျက်တောင်လေး ခတ်ရာက မ ခတ်တော.ပဲ.ထွက်လေးဝင်လေ အာနာပါနလုပ်သလို အမူအရာပါပဲ။ ဒါကိုရှုတဲ. အမူအရာပြတယ်။ တော.ကြ တော. မျက်စိတွေမှိတ်ပြီးတော. မေ.သလိုဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်တော် အဲဒါကိုဖလသမာပတ်ဝင်စားတယ်လို၊ သူ.လက်ကိုစမ်းကြည်.စမ်း ဘယ်လောက်ခိုင်သလဲဆိုတာနဲ. ဘုန်းကြီးကစမ်းကြည်.တယ်။ အဲဒါနဲ.သူ.လက်က လေးထားရာက မကြည်.တယ်။ ဘုန်းကြီးကမ မပြီဆိုရင်သူ.က အောက်ဖိတဲ.ပုံ မလိုက်ဖိလိုက် မလိုက်ဖိလိုက် ပေါ.။သူ.ကအောက်ကိုတအားဖိထားတယ်။ ဒါကြောင်.ဣရိယာပုတ်ခိုင်တဲ.ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပဲကို။ အမှန် ကတော. အပ္ပာနာဇောများသည်ဣရိယာပုတ်ကိုလည်း ထောက်ပံ.၏။ခိုင်ခံ.စေ၏ ဒါပေမယ်.မြောက်လိုမရ အောင်ဖြစ်တဲ. သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူတို.ကမြောက်လိုမရအောင်ဖြစ်တယ်လိုယူတယ်။ သူ.ကအံကြိတ်ပြီး ပြန်ပြီးဖိတဲ.ပုံပေါ်နေတယ်။ ဒါနဲ.စဉ်းစားကြည်.တယ်။
ကလေး ရဲ.ပကတိအားနဲ.ဆိုလိုချင်လျင် သူ.ကပြန်ပြီးဖိပေမယ်. ငါ.အထက်မြောက်ဆွဲလိုရှိလျှင်ပကတိက လေးရဲ. အားဆိုလျှင်ကြွပြီးတော. တမိုက်လောက် တထွာလောက်မြောက်ပါရမယ်။ အဲဒီလိုပါအောင်သူကိုဆွဲမမြောက်နိုင်ဘူး၊ဒါပကတိကလေးရဲ.အင်အားမဟုတ်ဘူး။ဖလသမာပတ်ကလေးရှင်ရဲ.ဘုန်းကြီးကိုအရှင်ဘုရားရဲ.က
အတုအယောင်တွေ.ပေါ.များသော ခေတ်မှာ အတုအယောင်တွေခွဲခြားတတ်အောင် ဖိုလ်စိတ်အ ကြောင်း ဗဟုသုတကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဤသို့ တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေသော ၀ိပသနာဥာဏ် သည် ပင်လယ်ကူး သဘောင်္မှ လွှတ်လိုက်သော ငှက်နှင့်တူ၏။ တူပုံကား ရှေးခေတ် ကာလက ပင်လယ် ခရီးသည်တို့သည် ကမ်းစကျွန်း နီးရာအရပ်ကို မမှန်းဆ နိုင်သောအခါ၌ အသင့် ယူဆောင်ခဲ့သော ကျီးငှက်ကို လွှတ်လိုက်၍ စူးစမ်းကြ သတဲ့။ ထိုငှက်သည် သဘောင်္မှ ပျံသွား၍ အရပ်လေးမျက်နှာ၌ ကမ်းစကို ရှာသတဲ့။ ကမ်းကို မတွေ့ရ သေးလျင် သဘောင်္သို့သာ ပြန်၍ ပြန်၍ နားရသတဲ့။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလျက် မဂ်ဥာဏ် ဖြစ်လောက်အောင် ဥာဏ်အား မပြည့်သေး၍ တဖန် ကျဲကျဲ သွားခြင်းသည် ကမ်းစကို မတွေ့ရသော ထိုငှက်၏ သဘောင်္ကို ပြန်ပြန် ကပ်နားခြင်းနှင့် တူ၏။ ကမ်းအရပ်ကို မြင်လျင်ကား ထိုငှက်သည် သဘောင်္ဆီသို့ မပြန်လာ တော့ဘဲ ထိုကမ်းဆီ သို့သာလျင် တဟုန်တည်း ပျံသွားသတဲ့။ ဤအတူပင် ဤမှတ်သိမှု ၀ိပဿနာ ဥာဏ်သည်လည်း က္ကနြေ္ဒငါးပါး ရင့်သန်သော ခဏ၌ အမှတ် အထူး ကောင်းနေစဉ် အတွင်းမှာပင် တစ်ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ် သာ၍ သွက်လက် ရှင်းလင်းစွာ အနည်းဆုံး သုံးလေးခါမျှ သိမြင်ပြီးလျင် ထိမှု သိမှု ကြားမှု မြင်မှု စားမှု နံမှု စသောဤသင်္ခါရ ၆ မျိုးတို့တွင် (တွေ့ကြုံ လွယ်ရာကို ရှေးထား၍ စဉ်သည်) ထိုခဏ၌ ထင်ရှား ဖြစ်ပျက်သော သင်္ခါရ တစ်မျိုးမျိုးကို မှတ်သိပြီး သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် မှတ်တဲ့ အာရုံနှင့် မှတ်သိမှု ဟူသော သင်္ခါရ အလုံးစုံ ကင်းပြတ် ချုပ်ငြိမ်းသော နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် တွေ့မြင်လျက် မဂ်ဖိုလ် အဆင့်သို့ သာလျှင် ဆိုက်ရောက်သွား လေတော့၏။
ဤသို့ ဆိုက်ရောက် သွားသော သူအား ဆိုက်ရောက် ခါနီးတွင် ရှေးအဖို့က တစ်ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ် သွက်လက် ကောင်းမွန်သော မှတ်ချက်များလည်း ကောင်းစွာ ထင်ရှားပေ၏။ နောက်ဆုံး မှတ်ချက်၏ အခြားမဲ့၌ သင်္ခါရ အာရုံ အလုံးစုံကို စွန့်လွှတ်ပြီးလျင် သင်္ခါရ ကင်းပြတ် ချုပ်ငြိမ်းသော နိဗ္ဗာန် အာရုံသို့ ကူးပြောင်း သွားပုံလဲ ကောင်းစွာထင်ရှား၏။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ထိုသို့ရောက်ပြီးသော သူတို့သည် ဤသို့ ပြောပြတတ်ကုန်၏။ “အာရုံနဲ့ အမှတ်တွေ အကုန်လုံးတိကနဲ ပြတ်ပြီး ရပ်စဲသွားသည် “ဟူ၍လည်းကောင်း၊”အာရုံနဲ့ အမှတ်တွေ အကုန်လုံး ပြုတ်ကျသွားသည်” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “ဆွဲကိုင်ထားရာမှ လွတ်ကျ သွားသလိုပင် အာရုံနှင့် အမှတ်တွေမှ ကျွတ်လွတ်သွားသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “အာရုံနဲ့ အမှတ်တွေ ချုပ်ပြတ်သွားပုံက မီးတောက်ကလေး ငြိမ်းသွားသလိုပင် သိပ်လျင်မြန်တာပဲ” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “အမှောင်ထဲမှ အလင်းထဲသို့ ရုတ်တရက် ရောက်သွားသလိုပင် အာရုံနှင့် အမှတ်တွေမှ လွတ်သွားသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊’အရှူပ်ထဲမှ အရှင်းထဲသို့ ဖြုတ်ကနဲ ရောက်သွားသလိုပင် အာရုံနှင့် အမှတ်တွေမှလွတ်ထွက်သွားသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ရေထဲမှာ မြုပ်သွားသလိုပင် အာရုံရော မှတ်စိတ်ရော မြုပ်သွားသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “ပြေးလာသော သူကို ဆီး၍ တွန်းလိုက်သလိုပင် အာရုံနှင့် အမှတ် ရပ်တန့် သွားသည်” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “အာရုံရော မှတ်စိတ်ရော ပျောက်သွားသည်” ဟူ၍ လည်းကောင်း ဤသို့ စသည်ဖြင့် ပြောပြတတ်ကြပေသည်။
သင်္ခါရ ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ သဘောကို မျက်မှောက်တွေ့ရသော ထိုအချိန် ကာလ သည်လည်း မကြာမြင့် လှချေ။ တစ်ကြိမ် တည်းသော မှတ်သိမှု၏ ကာလကဲ့သို့ တစ်ခဏ ကလေးမျှ သာတည်း။ထို့နောင် ထိုသို့ ဖြစ်ပုံကို ပြန်၍ ဆင်ခြင်မိ၏။ အာရုံနှင့် အမှတ်တွေ ချုပ်ကင်းလျက် ငြိမ်းသွားတာဟာ တရားထူးပဲ ဟူ၍ ဖြစ်စေ၊ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ပဲ ဟူ၍ဖြစ်စေ၊ ဆင်ခြင်မိ၏။ အချို့သော သုတရှိသူ သည်ကား သင်္ခါရ ချုပ်ကင်းလျက် ငြိမ်းတဲ့ သဘောက နိဗ္ဗာန်ပဲ၊ ငြိမ်းရာသို့ ဆိုက်ရောက်လျက် မျက်မှောက် သိတာက မဂ်ဖိုလ်ပဲ၊ ငါသည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်တွေ့ရပြီ၊ သောတပတ္တိမဂ်ဖိုလ် ရပြီ ဟု ဆင်ခြင်မိ၏။ ဤသို့သော ဆင်ခြင်မှုမှာ သင်္ခါရ ချုပ်ငြိမ်းမှုသို့ ဆိုက်ရောက်ပုံကို နာကြား မှတ်သားဖူးသော သူအား ကျန ပြည့်စုံစွာ ဖြစ်တတ်၏။ ထို့ပြင် ပယ်ပြီး ကင်းပြီးသော ကိလေသာ မပယ်ရသေး မကင်းသေးသော ကိလေသာတို့ကိုလည်း အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဆင်ခြင် တတ်သေး၏။ ဆင်ခြင်ပြီးလျှင် ဖြစ်ဆဲ ကိုယ်စိတ် အမူအရာများကို မှတ်မြဲပင် မှတ်ပြန်၏။ ထိုအခါ၌ ရုပ်နာမ် အဖြစ်အပျက် များသည် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖြစ်လျက် ထင်ပေါ်၏။ အစနှင့်အဆုံး အဖြစ်နှင့် အပျက် နှစ်ပါးလုံးပင် ပီပီသသ ထင်ရှား၏။ ထို့ကြောင့် အမှတ် ကျဲသွားသည် လျှောကျ သွားသည် ဟုထင်ရ၏။ အမှန်အားဖြင့်လည်း ဥဒယဗ္ဗယ ဥာဏ်သို့ ပြန်ရောက် နေပြီဖြစ်၍ လျောကျသည် မှန်ပေ၏။ထိုဥာဏ်သည် ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ် ဖြစ်သောကြောင့် အလင်းရောင်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန် အာရုံများကိုလည်း တွေ့ရတတ်၏။ အချို့မှာ ဒုက္ခ ဝေဒနာ ကလေးများ ကိုလည်း တစ်ခဏမျှ တွေ့ရတတ်၏။ အများ အားဖြင့်ကား အလွန်ကြည်လင်သော စိတ်များ အဆက်ဆက် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိတတ်၏။ ထိုအခါမှာ ဟင်းလင်းပြင်၌ စိတ်တကိုယ်တည်း တည်နေရသလိုပင် ဟာတာ ရှင်းတင်းကြီး ဖြစ်လျက် အလွန်ချမ်းသာ၏။ အလွန်နေကောင်း၏။ ထိုစိတ် များကိုလည်း မမှတ်နိုင်။ မှတ်သော်လည်း ပိုင်းပိုင်းခြားခြား မသိနိုင်၊တခြားကိုလည်း စိတ်မကူးလို၊ စိတ်ကူး၍လည်း မဖြစ်နိုင်ဘဲ ကြည်လင် ချမ်းသာ လျက်သာ ရှိတတ်သည်။ ကြည်လင်သော ထိုစိတ်များ အားနည်းသွားသော အခါ၌ ဆက်၍ မှတ်လျင် အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိ၏။ အတန်ကြာလျှင် အသိမ်မွေ့ဆုံး အကောင်းဆုံး မှတ်သိမှုသို့ တဖန် ပြန်၍ရောက်တတ်၏။ ထိုအခါမှာ ဥာဏ်အားကောင်းလျှင် သင်္ခါရငြိမ်းတဲ့ သဘောသို့ ရှေးကလိုပင် ဆိုက်ရောက်သွားတတ်၏။ သမာဓိဥာဏ်ထက်သန်လျှင် ဤနည်းဖြင့် ခဏခဏလည်း ဆိုက်ရောက်တတ်၏။ ယခုကာလပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ပထမ မဂ်ဖိုလ်ကိုရရန်သာ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ရှိသောကြောင့် ရောက်ပြီးသော ပထမဖိုလ်သို့သာလျှင် ထပ်ကာထပ်ကာ ရောက်ခြင်းပေတည်း။ ဤသည်ကား သောတာပတ္တိဖိုလ်သို့ ရောက်ပြီးသည့်တိုင်အောင် အားထုတ်ပုံ မှတ်စဉ်နှင့် ဥာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်ပုံပေတည်း။
Posted by Kyaw81 at 9:58 PM2comments
ရေလယ်ဆရာတော်နှင့် ညောင်လွန့်တောရ ဆရာတော်တို့သည် တရားထူးရလျှင် အသိပေးကြ စတမ်း ကတိအရ ရှင်က၀ိအကြောင်း စာရေးလျှောက်ထားသဖြင့် ညောင်လွန့်ဆရာတော် မိတ္ထီလာသို့ ကြွလာ စုံစမ်း စစ်မေးတော်မူသည်။
ရှင်က၀ိက လောကီ လောကီသတ်သတ်၊ လောကုတ္တ့ရာ လောကုတ္တ့ရာ သတ်သတ်မေးရန် ကြိုတင် လျှောက် ထား၏။လောကုတ်-လောကီ တစ်ရက်စီခွဲ၍ မေးတော်မူသည်။
အနယ်နယ်မှ စာတတ် ပေတတ် အကျော် ဆရာတော်ကြီး အချို့ကလည်း စာမတတ်ဘဲ တရားထူး ရသည် ဆိုသည်ကို မယုံကြည်နိုင်ကြသဖြင့် အထပ်ထပ် စစ်မေးကြပုံ၊ နှိမ်ချသော စကားများ ပြောဆို၍ အပြစ်ကြီးကြပုံ၊ စာမတတ်သော ဦးက၀ိ၏ အလုပ်ခွင်နှင့် စပ်သော သိပုံများကို နောက်ဆက်တွဲ၌ ကြည့်ပါ။ ယင်းသို့ မေးမြန်းစိစစ် ကြသည်မှာ ပဓာနအားဖြင့် အစစ်အမှန် ၀မ်းမြောက် ကြည်ညိုလိုကြ၍ ဖြစ်သည်။ အထင်သေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ လည်း များစွာရှိ၏။ မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ထိုအစစ် အဆေး အမေးအမြန်း အားလုံးသည် ဦးက၀ိ၏ အရဟတ္တဂုဏ် ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးက ယုံကြည်လက်ခံ လာရအောင် မှတ်ကျောက်တင် အတည်ပြုပေး ကြရခြင်း ပင်တည်း။
မေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကပင် စာမသင်ဘဲ စာတတ် နေသော ပဋိပတ်သဘောကို အံ့သြမဆုံး ရှိကြရလေ၏။ထို့ကြောင့် (ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်နှင့် ၀ိဘင်းအဋ္ဌကထာ) တို့၌ အရိယာဖြစ်သွားလျှင် ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ မဖြစ်သူ မရှိနိုင် ဟု ဖွင့်ဆိုကြကုန်၏။
"ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ" ဟူသည် ရုပ်နာမ် သဘာဝကို သဒ္ဒါ အနက် စသည် ခွဲခြား ဝေဖန်၍ အမှန်တကျ ထိုးထွင်း သိမြင်သွားသည့် အသိဥာဏ်ထူး ရသူဟု ဆိုလိုပေ၏။ အရိယာတိုင်း ပဋိဝေဓအဖြစ် ရောက်သည်ကိုပင် "ပဋိသမ္ဘိဒါဥာဏ် ရသည်"ဟု ဆိုသည်။
အရှင် ကောဋ္ဌိကကဲ့သို့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပဘိန္န ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ ကား အသီးအခြားတည်း။ ထို့ကြောင့် အဋ္ဌကထာ စကားသည် အတ္ထ ပဋိသမ္ဘိဒါ သဘော သဘာဝကို သိမြင်ခြင်းမျှကိုသာ ဆိုလိုဟန်ရှိ၏။
မေး။ ။ရှင်က၀ိ၊ လောကီဈာန် အင်္ဂါ ငါးပါး ပြောစမ်းပါ။
ဖြေ။ ။ဆရာတော် အမိန့်ရှိတဲ့ ဈာန်ကို တပည့်တော် မပြောတတ်ပါ။ တပည့်တော် ပြောတတ်သလို ပြောပါရစေဘုရား။ (ပြောပါ၊ ပြောပါ ဆို၍) ဆရာတော်ဘုရား ဟောဒါက ကသိုဏ်းဝန်းပါ ဘုရား။ ပထမ ကသိုဏ်း ၀န်းပေါ်ကို အာရုံသိမ်းပြီး တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆင်ခြင်တယ်။ ကြက်သီးထပြီး တုန်လာတယ်။ ချမ်းသာနေတယ်။ တည်ငြိမ်နေတယ်။
မေး။ ။ဘာ...ဘာ...ဘာဗျ ရှင်က၀ိရဲ့၊ ပြန်ပြောစမ်းပါဦး။
ဖြေ။ ။ဟောဒါက ကသိုဏ်းဝန်းပါ ဘုရား။ အဲသည်ပေါ်ကို အာရုံသိမ်းပြီး တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆင်ခြင်တယ်။ ကြက်သီးထပြီး တုန်လာတယ်။ ချမ်းသာနေတယ်။ တည်ငြိမ်နေတယ်။ အဲဒါပါပဲ ဘုရား၊ အမည်ကတော့ အရှင်ဘုရားတို့ မှည့်ချင်သလိုမှည့်၊ ခေါ်ချင်သလို ခေါ်ရုံပါပဲဘုရား။
ထိုအခါ ညောင်လွန့်ဆရာတော်က ဟုတ်ပြီ ရှင်က၀ိရေ၊ ကသိုဏ်းဝန်းအပေါ် (နှာသီးဖျားမှာ မှတ်လျှင်နှာသီးဖျားကို ယူပါ။) အာရုံသိမ်းပြီးတင်လိုက်တာက ၀ိတက်၊ ဆင်ခြင်တာက ၀ိစာရ ၊ကြက်သီးထပြီးတုန်လာတာက ပီတိ၊ ချမ်းသာတာက သုခ၊ တည်ငြိမ်နေတာက ဧကဂ္ဂတာ၊ ကဲ...... သဘောကျပါပြီဗျာ၊ ရှေ့ဆက် လျှောက်ပါဦး ဆို၍ ပဉ္စမဈာန် အထိ ဆက်၍ လျှောက်ထားရ၏။ (စာ သိပုံနှင့် အလုပ်သိပုံကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာသင့်၏။)
မေး။ ။ဒါဖြင့် နေပါဦး၊ အာကာသာနဉ္စာယတန ဈာန်ဟာ ပညတ်အာရုံပြု သလား၊ ပရမတ် အာရုံပြုသလား။
ဖြေ။ ။ပညတ် အာရုံပြုပါတယ်ဘုရား။
မေး။ ။၀ိဥာဏဉ္စာယတန ဈာန်ကကော။
ဖြေ။ ။ပရမတ် အာရုံပြုပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။အာကိဉ္စညာယတန ဈာန်ကကော။
မေး။ ။နေ၀သညာ နာသညာယတန ဈာန်ကကော။
ဖြေ။ ။ပရမတ် အာရုံပြုပါတယ်ဘုရား။
မေး။ ။ဒါဖြင့် အာကာသာနဉ္စာ ယတန ဈာန်ကနေ ၀ိညာဏဉ္စာယတန ဈာန်ကို တက်တော့
အောက် အာရုံပြုသလား၊ အထက်အာရုံပြုသလား။
ဖြေ။ ။အောက် အာရုံပြုပြီး တက်ပါတယ် ဘုရား။
ထိုအခါ ဆရာတော်က ဟင်..... ဘယ့်နှယ် မဟုတ်တာ၊ အထက်တက်တာ ဘာ့ကြောင့်အောက်အာရုံပြုရမှာတုံးဗျဟု ဆို၍ ရှင်က၀ိက......
တပည့်တော် ဥပမာနဲ့ လျှောက်ပါ့မယ်ဘုရား၊ ဟောဟိုနားမှာ မစင်ပုံကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီမစင်ပုံကြီးထဲကျသွားမှာစိုးလို့ အထက်တွယ်တက်ရတာပါ၊ အဲသလိုပါပဲ၊ အောက်ကို အာရုံပြုပြီး အထက်ကို တွယ်တက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဟုပြန်၍ လျှောက်ထားသဖြင့် ကျေနပ်တော်မူသွား၏။
အဲဒီတုန်းက ဆရာတော်များက ရှေ့ဆက်မမေးလို့၊ မေးရင် အရူပဘုံမှာ နတ္ထိဘောပညတ် မရှိလို့ စာက ဆိုထားတယ်။ ပညတ်ကိုလဲ အာရုံပြုတယ်လို့ ဆိုတယ်၊ ဘယ်လို ပညတ်ကို ဘယ်ပုံ အာရုံပြုသတုံးလို့ မေးမယ်ဆို ပါတော့။ ဒီတော့ မရှိပညတ်ကို အာရုံပြုတယ် လို့ ဖြေလိုက်မှာပဲ။ မရှိတာကို ဘယ်လိုအာရုံပြုသတုံးလို့ ထပ်မေး မယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပြီး ဒီမှာကြည့်စမ်း၊ မြင်တယ်မဟုတ်လား၊ ၀ှက်ထားလိုက်ပြီ၊ ရှိသေးရဲ့လား၊ မရှိတော့ ဘူး။ မရှိပေမယ့် စောစောက မြင်ဖူးတာကို အာရုံပြုကြည့်စမ်း၊ အာရုံပြုလို့ရတယ်မဟုတ်လား၊ အဲသလို မရှိပညတ် ကို အာရုံပြုတယ်လို့ ဖြေလိုက်မှာပဲ ဟု ဦးက၀ိ ကိုယ်တိုင် တစ်ချိန်က ဟောပြခဲ့ဖူး၏။
ရေလည် ဆရာတော်သည် ရှင်က၀ိနှင့် ရှင်ဝိဇေယတို့အား အပန်းဖြေစေပြီးနောက် စာပေ ကျမ်းဂန်နှင့်ညှိ၍ပို၍ တိကျစွာ ကြည်ညိုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံ မေးစစ် ပြန်လေ သည်။ ဦးဖြိုးသာ နှင့် ဦးဘစံတို့လည်း အနား၌ပင် နာယူကြည်ညို နေကြ၏။
(မှတ်ချက်။ ။စာမတတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဖြေဆိုရန်မည်မျှခက်ခဲသော မေးခွန်းများ ဖြစ်သည်ကို သတိပြု၍ ဖတ်ပါ။)
မေး။ ။ရှင်က၀ိ၊ ဘုံသုံးပါးမှာ ဘယ်သူက အိမ်ဆောက်လုပ်ပေးပါသလဲ။
ဖြေ။ ။တဏှာက ဆောက်လုပ်ပေးပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။တေဘုမ္မက သင်္ခါရဟာ ဘယ်ကမျိုးစေ့ ဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အ၀ိဇ္ဇာက မျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။လူရယ်လို့ ဖြစ်တာ ကုသိုလ်ကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် အကုသိုလ် ကြောင့်လား။
ဖြေ။ ။လူဖြစ်တာ ကုသိုလ်,အကုသိုလ် နှစ်မျိုးလုံးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
မေး။ ။ကုသိုလ်ဟာ သုခ ဆိုမလား၊ ဒုက္ခဆိုမလား။
ဖြေ။ ။ကုသိုလ်ဟာ သုခလို့ ဆိုပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ဒုက္ခပါပဲ။
မေး။ ။လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာဆိုတာ အမှန်ရှိသလား။
ဖြေ။ ။သင်္ခတနယ်မှာ အမှန်ပင်ရှိပါတယ်။ ပရမတ် သဘာအရဆိုလျှင် မရှိပါ။
မေး။ ။ငရဲခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ နတ်ပြည်စံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိသလား။
မေး။ ။လောကကြီးမှာ ခံစားသူ စံစားသူ နှစ်မျိုးရှိသည်တွင် ဘယ်သူ့ကို အမှန်ခေါ်မတုံး။
ဖြေ။ ။နှစ်မျိုးစလုံးပင် မှန်ပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။၎င်းင်း နှစ်မျိုးကို ဘာခေါ်မတုံး။
ဖြေ။ ။နာမ် ရုပ် နှစ်ပါးဟု ခေါ်ပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။လောကမှာ သတ်သူ၊ သေသူ ရှိသလား။
ဖြေ။ ။ရှိပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။ရှိပါတယ် ဆိုတာ ဘယ်လို မှတ်ရမလဲ။
ဖြေ။ ။နာမ်ရုပ် နှစ်ပါးပါပဲဘုရား။
မေး။ ။သူ့အသက် သတ်လျှင် ငရဲကျတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလား။
ဖြေ။ ။အမှန်ပါပဲ ဘုရား။
မေး။ ။မှန်တယ်ဆိုလျှင် ဘယ်ဟာ အမှန်ခေါ်မတုံး။
ဖြေ။ ။ရုပ်နာမ် နှစ်ပါးဟာ ငရဲကျအောင်လဲ သူတို့ပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လဲ သူတို့ပါပဲ။
မေး။ ။သတ်သူသေသူရှိတယ် ယူတာမျိုး၊ မရှိဘူးယူတာမျိုး၊ ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် ဘယ်ဟာ သမ္မာအယူခေါ်၍ ဘယ်ဟာ မိစ္ဆာအယူ ခေါ် တုံး။
ဖြေ။ ။ရုပ်နာမ် နှစ်ပါးကလွဲ၍ ရှိတယ်မရှိဘူး နှစ်မျိုးစလုံးပင် မိစ္ဆာအယူဆိုရမှာပဲ ဘုရား။
မေး။ ။သမ္မာအယူ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ယူရမှာတုံး။
ဖြေ။ ။ရုပ်နာမ် နှစ်ပါးသာ ရှိတယ်ယူလျှင် သမ္မာအယူ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။ပရမတ်သဘောကို မသိသောသူ ပါရမီဆယ်ပါး ပြည့်စုံနိုင်ပါသလား။
မေး။ ။ပညတ်ပရမတ် နှစ်ပါးရှိရာ ပညတ်ကိုသာ သိသောသူ မဂ်ကိုရသလား။
မေး။ ။ပညတ် ပရမတ် နှစ်ပါး ဘယ်ဟာ အမှန်ခေါ်မတုံး။
ဖြေ။ ။ပရမတ်ကိုသာ အမှန်ခေါ်နိုင်ပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။မိစ္ဆာအယူ သမ္မာအယူ နှစ်မျိုးတွင် ဘယ်အခါ သမ္မာအယူခေါ်မတုံး။
ဖြေ။ ။ဒိဋ္ဌိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာ ကင်းလွတ်သည်ကစ၍ သမ္မာအယု ဖြစ်ပါပြီဘုရား။
၁၂၈၇-ခုနှစ် တော်သလင်းလဆန်း ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ အချိန်တွင် ဖက်ပင်အိုင် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ကြွလာတော်မူသောအခါ ဆရာတော် ဦးပုည၊ ဦးဇာဂရ စသော ရဟန်း တော်များလည်း ပါကြ၏။
ဒါယကာများ ဆည်းကပ်နေကြစဉ် ဖက်ပင်အိုင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက မြင်းခြံဆရာ တော် ဦးက၀ိအား အောက်ပါအတိုင်း မေမြန်းစိစစ်လေသည်။
ဦးက၀ိတို့ ကြွလာမယ့် အကြောင်းကို ပင့်စာ၌ ပါသောကြောင့်သာ ယနေ့ညနေ လာခဲ့ရတာ ပါဘုရား။ သို့မဟုတ်လျှင် နက်ဖြန် နေ့ဆွမ်း မှီရုံလောက်မှာသာ လာမယ်ဟု ကြံပါတယ်။ လူကြီးဆို တော့ သွားရလာရတာများ တယ် ၀န်လေးတယ် ဦးက၀ိရဲ့။
ကဲ ဦးပုညတို့ ဦးဇာဂရတို့၊ ဦးက၀ိ နှင့် စကားပြောကြပါ ဘုရား၊ တပည့်တော်တော့ မော သေးတယ်။
မှန်လှပါ ဘုရား၊ အမောအပန်းဖြေ၍ နားနေပြီးနောက် ဆရာတော်ဘုရားသာ အမိန့်ရှိ တော်မူပါ ဘုရား ဟု လျှောက်ကြသဖြင့် အမောအပန်းမဖြေဘဲ ဆက်လက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလေ၏။
ဦးက၀ိ၊ တပည့်တော်များသည် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ဘွားကနဲ ယခုမှ တွေ့မြင်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်
များလဲ မဟုတ်ကြပေ။ ရှေးကလဲ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးသူများ ဖြစ်ကြ၍ တစ်ပါးကိုတစ်ပါး အားနာစရာ လဲမရှိ။ မေးမြန်းစရာရှိသလောက်တော့ မေးမြန်းခွင့် မရပေဘူးလားဘုရား။
မှန်လှပါ ဆရာတော်ဘုရား၏ တပည့်ကို အလိုရှိသရွေ့သာ ဆုံးမတော်မူပါဘုရား။
ကဲ-ဒါဖြင့် ရှေးက ပဲခူးမြို့ အဗျားရွာတွင် တွေ့ကြစဉ်ကတော့ ဗြုန်းကနဲ တွေ့ကြရတာကလဲ တကြောင်း၊ အာဂန္တုကချင်း ဖြစ်နေကြတာကလဲ တကြောင်းမို့ မေးသင့်သလောက်သာ မေးရပေတယ်။ ယခုဆက်၍ မေးရပြန်တာပေါ့။
မေး။ ။ဦးက၀ိရဲ့၊ ယခု သီတင်းလဲကျွတ်ခါနီးပြီ။ ယခုဝါတွင်း ဘာကိုများ အာရုံပြု၍ သီတင်း သုံး နေပါသတုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။သာသနာတော်ကို အာရုံပြုနေပါတယ် ဘုရား။
မေး။ ။သာသနာတော်ကိုဘယ်ပုံ အာရုံပြုပါသတုံးဘုရား။ သာသနာ ဆိုတာပရိယတ် ပဋိပတ် နှစ်ပါး ရှိပါတယ်။ ထိုနှစ်ပါးတို့တွင် ဘယ်သာသနာကို ဘယ်ပုံအာရုံပြုပါသတုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။ဘုရားတပည့်တော်မှာ စာကလဲမတတ်တော့ ပရိယတ္တိ သာသနာကို ချီးမြှင့်ခြင်းငှာ မစွမ်း နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ပဋိပတ္တိ သာသနာပေါ်တွင်သာ သမာဓိ မရသေးသော ပုဂ္ဂိုလ် များလဲ သမာဓိ ရလေအောင်၊ ရပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များလဲ ရင့်သည်ထက်ရင့်အောင်၊ ရင့်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များလဲ လိုရင်းကိစ္စ ပြီးစီးကြအောင်သာ အာရုံပြုနေရပါ၏ဘုရား။
မေး။ ။ ဒါဖြင့်လျှင် မေတ္တာပေါ့ ဘုရား။
မေး။ ။မေတ္တာဆိုတော့သတ္တပညတ် အပေါ်၌ စိတ်ကိုထား၍ လောကီရှိပါသေးတယ်။ လောကုတ္တ့ရာ၌ ကော ဘယ်လို အာရုံပြုပြီးစိတ်ကို ထားပါသတုံးဘုရား။ လောကုတ္တ့ရာ မှာကော စိတ်ကို မထားဘူးလား။
ဖြေ။ ။ လောကုတ္တ့ရာပေါ်မှာ စိတ်ကို ထားပါရဲ့ ဘုရား။
မေး။ ။အဲဒီ လောကုတ္တ့ရာပေါ်မှာချည်းဘဲ စိတ်တွေကိုထားပါတော့လား ဘုရား။ အဘယ်ကြောင့် လောကီ စိတ်တွေသို့ ရောက်နေရသေးသလဲ။
ဖြေ။ ။လောကုတ္တ့ရာပေါ်မှာ ချည်း သက်သက် စိတ်ကို မထားနိုင်ပါဘုရား၊ ခန္ဓာဝန်ကြီးက အလွန်လေးသောကြောင့် လောကီတလှည့်၊ လောကုတ္တ့ရာတလှည့် ပြောင်းခံနေရ ပါ ၏ ဘုရား။
မေး။ ။ကဲ-ဒါဖြင့် လောကီပညတ် အာရုံပြုပုံကိုတော့ ထားလိုက်ပါဦးတော့ ဘုရား၊ လောကုတ္တ့ရာ ပရမတ်ကိုတော့ ဘယ်လို အာရုံပြုပါသတုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။မိမိ မြင်ဖူးတာကို အာရုံပြုပါတယ်ဘုရား။
မေး။ ။ဒါဖြင့် တခြားစာတွေ ထားလိုက်ပါဦးတော့၊ သင်္ဂြိုဟ် ဆိုတဲ့အတိုင်း မဂ္ဂံဖလဉ္စ နိဗ္ဗာနံ၊ ပစ္စဝေက္ခတိ ပဏ္ဍိတောစသည်ဖြင့် ပစ္စဝေက္ခဏာပေါ့။
မေး။ ။ဒါဖြင့် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုရတာနှင့် ပညတ်ကို အာရုံပြုရတာ ဘယ်က သာ၍
ခက်သတုံးဘုရား။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုရတာက သာ၍ မခက်ပေဘူးလား။
ဖြေ။ ။တပည့်တော်သဘောဖြင့် ဘယ်သင်းမှ မခက်ပါဘုရား။
မေး။ ။မဂ်ကို အာရုံပြုပုံ ပြောပြစမ်းပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ဥပမာ-ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည် ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်၍ တက်လာတယ် ဆိုပါ တော့ဘုရား၊ အဲသည်တော့ ဘ၀င် အနည်းငယ်မျှ ကျသွားပြီးနောက် ရှေ့စိတ်သုံးသုံးပါးက ကိလေသာတရားကို ဖယ်ရှားပေးပါရောဘုရား၊ နောက်စိတ်က နိဗ္ဗာန်ကို မြင်ပါရော။
ဒါနဲ့ စိတ်, စေတသိက,် ရုပ် ဆိုတဲ့ တရားသုံးပါး ဖြစ်ချုပ်-ဖြစ်ချုပ် ဖြစ်နေတာ ကိုပင် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲကြီးပါကလား၊ ဒီဆင်းရဲဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်သလဲလို့ စစ်လိုက်တော့ ၎င်းင်း စိတ်, စေတသိက်, ရုပ် ကို ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ လောဘကို မြင်ပါရောဘုရား။
ယခု ပြောနေတာက တစ်ခုစီ ပြောနေရလို့ ကြာနေတာပါဘုရား။ ဟိုမှာတော့ ဘာမှ မကြာပါဘုရား။ ဆင်းရဲကို သိတာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ ဖြစ်သွားတာပါ။
(ကဲ-ပြောသာ ပြောပါဘုရား )
အဲဒီလို လုပ်ပေးတဲ့သူကို မြင်တော့ နိုင်တဲ့သူက ဗြုန်းခနဲ ပြုလုပ်ပေးတဲ့သူကို သတ်လိုက် ပါရော၊ အဲဒါက မဂ် ပါဘုရား။
ဒီတော့ စိတ်, စေတသိက်, ရုပ်များလဲ ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားသလို ဖြစ်သွားတော့ အကြောင်းအကျိုး ပြတ်သွားပါရောဘုရား။ အဲဒါ နိဗ္ဗာန် ပါပဲဘုရား။
ဒါနဲ့ နောက်တော့ ဖိုလ်ဇော အုပ်သွားပါရော။ အဲဒါ မြင်ဖူးတာတွေပါပဲဘုရား။
မေး။ ။နေစမ်းပါဦးဘုရား။ ဒီမဂ်ဖြစ်တဲ့အခါများ ထင်ထင်ရှားရှား မဂ်ဖြစ်မှန်း သိရဲ့လား။
ဖြေ။ ။မသိပါဘုရား၊ နောက် ဆင်ခြင်မှ သိရပါတယ်ဘုရား။
မေး။ ။နောက်-ဆင်ခြင်မှ သိရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့လား။
ယထာပိ မူလေ အနုပဒ္ဒဝေ ဒဠေ၊
ဆိန္နေပိ၊ ရုက္ခော ပုနရေ၀ ရူဟတိ။
ဧ၀ံပိ တဏှာနုသယေ အနုပဟတေ၊
နိဗ္ဗတ္တတေ ဒုက္ခမိဒံ ပုနပ္ပနံ။
(ဒဠေ-၌ ဟထိုး မပါ။ သတိပြု။ မနသာ ဒဠေန-စသည် ၎င်းး။)
အနုပဒ္ဒဝေ၊ စိမ်းစိမ်းလတ်လတ် မသတ်ဖြတ်သေးသော။ မူလေ၊ ရေသောက်မြစ်ကြီးသည်။ ဒဠေ၊ မြဲမြဲခိုင်ခံ့သည် ရှိသော်။ ဆိန္နေပိ၊ အခက်အရွက် အပင်ပြတ်သော်လည်း။ ရုက္ခော၊ သစ်ပင်သည်။ ဧ၀ံ၊ ဤအတူသာလျှင်။ တဏှာနုသယေ၊ အဖန်ဖန်ကိန်းတတ်သော တဏှာကို။ အနုပဟတေ၊ မဂ်ဖြင့် မပယ်အပ်သေးသည် ရှိသော်။ ပုနပ္ပုနံ၊ အဖန်ဖန်တလဲလဲ။ ဣဒံဒုက္ခမ္ပိ၊ ဤသံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲသည်လည်း။ နိဗ္ဗတ္တတေ၊ ဖြစ်ရဦးမည်ကား မုချမလွဲတည်း။
ကျမ်းဂန်လာတဲ့အတိုင်း လောဘကို မဂ်ကပယ်တယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါရဲ့။ သိုသော်လည်း ယခုလောကမှာ တိုင်းတပါးက ရန်သူစစ်သည်ကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ရန် ထွက်သွားသော စစ်သူကြီးသည် မိမိတစ်ယောက်တည်း မသွားဘဲ နောက်လိုက် နောက်ပါ စစ်သည် ဗိုလ်ပါ များစွာတို့နှင့် ထွက်၍ ရန်သူစစ်သည်ကို တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်သလို ယခု လောကုတ္တ့ရာမဂ်ဟာလဲ လောဘကို သတ်ရန် အဖော်များ ရှိသေးသလား၊ တစ်ယောက်ထဲဘဲသတ်လေရော့သလား။
ဖြေ။ ။အဖော်ရှိပါသေးရဲ့ ဘုရား။
မေး။ ။အဖော်က ဘယ်သူတုံး၊ ထည့်ပေးစမ်းပါ။
ဖြေ။ ။ဥပမာ-ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်သည် ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်၍ အထွဋ် အထိပ်ရောက်ခါနီး ရှေ့စိတ်သုံးပါးက ကိလေသာတရား ကင်းစင်သွားအောင် ပယ်ရှားလိုက်ပါရောဘုရား။ အဲဒီလို ကိလေသာ စင်သွားတော့ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်တဲ့စိတ် ပေါ်ပေါက်လာပါရောဘုရား။ ၎င်းစိတ်က နိဗ္ဗာန်ကို မြင်တော့ ၎င်းစိတ် မြင်သော နိဗ္ဗာန်ကို မဂ်ကမှီခိုတွယ်ကပ်ပြီး လောဘကို ပယ်သတ်လိုက်ပါရော ဘုရား။
မေး။ ။မဂ်တော့ သဘောကျပါပြီ ဦးက၀ိရယ်၊ အလွန်သိမ်မွေ့ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ နေရာတွေနော်၊
တပည့်တော် များကတော့ စာတွေ့ ပြောရတာ၊ ဒါနဲ့ မဂ်နောက်ဖိုလ် ဇောအုပ်လိုက်တယ် ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ ဘယ့်နှယ်နေသတုံး ဘုရား။
ဖြေ။ ။ကောင်းကောင်း မသိလိုက်ရပါဘုရား။
မေး။ ။မဂ်နောက်ဖြစ်တဲ့ ဖိုလ်က အာနန္တ့ရိကဖိုလ် ခေါ်တယ် ဘုရား၊ နှစ်ကြိမ်-သုံးကြိမ် ထဲဖြစ်တော့ စိတ်ကလဲ အလွန်လျင်မြန်သဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါထက် မဂ်ကို ဆင်ခြင်တဲ့အခါ သိရှိပုံများ ဘယ်လို နေသတုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။ဥပမာ-ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဟာ သောတာပတ္တိမဂ်ကို ရတယ်ဆိုပါတော့၊ ၎င်းး ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိမိရသော မဂ်ကို ဆင်ခြင်သောအခါ ငါ သောတာပတ္တိ မဂ်ကို ရပြီ ဟု သိရုံပါဘဲ ဘုရား။
မေး။ ။ဖိုလ်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါ ဘာကို အာရုံပြုသတုံး ဘုရား၊ အဲဒီ ဖိုလ် စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုများနေသတုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။မိမိ မြင်ဖူးတဲ့ အကြောင်းအကျိုး ပြတ်ရာကလေးကို အာရုံပြုလိုက်တာနှင့် ဖိုလ်စိတ်ဖြစ်လာပါရော ဘုရား၊ အဲဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာပြီး မှိန်းနေပါရော ဘုရား။
အဲဒီလို ဆင်ခြင်ပြီးဝင်စားတာက ၀ဠဉ္စနဖိုလ် ခေါ်တယ်။ အဲဒီဖိုလ်မှ သေသေချာချာ သိရတယ် ၊တယ်ပြီးသိမ်မွေ့တယ်ဘုရား၊
၀ိသုဒ္ဓိ ခုနစ်ပါး ပြောစမ်းပါ ဟု မေးရာ-
အရှင်ဘုရားတို့ ၀ိသုဒ္ဓိကို တပည့်တော် မပြောတတ်ပါ၊ တပည့်တော် ပြောတတ်သလို ပြောပါရစေ
ပြောပါ ပြောပါ ဟု ခွင့်ပြုသည်နှင့် ဦးက၀ိက အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ထားသည်။
၁။ တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရှေးဦးစွာ ဘုရားကန်တော့၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေပြီးလျှင် မိမိခန္ဓာကိုယ် ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို အားထုတ်ဆဲအခါ ဘုရားကိုလှူ၊ အချိန်မပိုင်းနှင့်၊ မိမိ စွမ်းနိုင် သမျှ အားထုတ်၊ သမာဓိရလာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ပူမှု၊ အေးမှု စသော ဝေဒနာ ပေါ်လာ လိမ့်မယ်။ အဲဒီ ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာကို ရှုဆဲအခါ၌ မျက်စိကလည်း တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့် မကြည့်ဘူး။ ပါးစပ်ကလည်း စကားမပြောဘူး။ လက်ကလည်း ကိုးယိုးကားယား မလုပ်ဘူး။ အဲဒီတော့ စက္ခုံနြေ္ဒ၊ သောတိနြေ္ဒ၊ ယာနိနြေ္ဒ၊ ဇီဝှိနြေ္ဒ၊ ကာယိနြေ္ဒ ဟူသော ဣနြေ္ဒငါးပါး လုံနေတယ်၊ အဲဒါ သီလ စင်ကြယ်တယ်။ အဲဒါ သီလ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၂။ ဝေဒနာပေါ်မှာ စိတ်တည်နေတော့ စိတ် စင်ကြယ်တယ်။ အဲဒါ စိတ္တ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၃။ သီလကလည်း စင်ကြယ်၊ စိတ်ကလည်း စင်ကြယ်တော့ မှန်တာ မြင်တာပေါ့။ မှန်တာ မြင်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ မီးခတ်နဲ့ မီးခတ်ကျောက် ခတ်လိုက်တော့ မီးပွင့် ကလေးတွေ ဖွားဖွား ဖွားဖွား နှင့် မြင်ရသလို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ မွေးတွင်းပေါက်က မြင်ရတယ်။ အဲသည်လို မြင်ရတော့ ငါ့မှာ ခြေလည်းမရှိ၊ လက်လည်း မရှိ၊ ကိုယ်လည်း မရှိ၊ ဦးခေါင်းလည်း မရှိ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး သုဉ်းသွားတယ်။ အဲသည်တော့ အမြင် စင်ကြယ်တယ်။ အဲဒါကို ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၄။ အဲသည်လို မြင်ရတော့ ဟုတ်ပါပေတယ်၊ မှန်ပါပေတယ် ဟု ဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်လာတယ်။ အဲသည်တော့ ယုံမှား ကင်းသွားတယ်၊ ကင်္ခါဝိတရဏ ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၅။ အဲသည်လို မြင်ရ တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာတာပေါ့။ ၀မ်းသာတော့ အလင်းဓာတ်ဟာ မိမိရှေ့မှာ ပေါ်လာတယ်။ ၄င်း အလင်းဓာတ်ကြီးထဲမှာ သွားပြီး တွယ်နေတယ်၊ အဲသည်လို အလင်း ဓာတ်ကြီးထဲမှာ သွားတွယ်နေတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဝေဒနာတွေ ချုပ်ပြီး အေးနေတယ်။ အဲဒါ အန္တ့ရာယ် ၁၀-ပါးထဲမှာ နစ်နေတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီလို အလင်းဓာတ်ကြီးထဲမှာ တွယ်နေရာမှ ငါ့ဟာ မဟုတ်သေးပါဘူး ဟု ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အာရုံပြန်ပြီး ထိန်းလိုက်တယ်။ အဲဒါ မဂ္ဂါမဂ္ဂ ဥာဏဒဿန ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၆။ အဲသည်လို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အာရုံရောက်လာတော့ ဝေဒနာတွေ ပြန်ပြီး ပေါ်လာတယ်။ အဲသည်တော့ အာရုံက အထက် လွန်သွားလိုက်၊ အောက် ပြန်ကျသွားလိုက်နှင့် နေတယ်၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ မကျသေးဘူး။ အဲသည်တော့ ဇောကိုတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ချလာတော့ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ ကျသွားရော၊ အဲဒါ ပဋိပဒါ ဥာဏဒဿန ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၇။ အဲသည်လို ပဋိပဒါလည်း ကျသွားရော၊ သေနတ်ကို ယမ်းတောင့်ထည့်ပြီး စိတ်ကိုင်ဖြုတ် လိုက်သလို ဒင်း ဆို ပြတ်သွားပါရော၊ အဲဒါ ဥာဏ ဒဿန ၀ိသုဒ္ဓိ လို့ ခေါ်တယ်။
၁၂၈၇-ခုနှစ် ကဆုန်လဆုတ် ၄-ရက်နေ့ ပဲခူးမြို့ အဗျားရွာတွင် ဖက်ပင်အိုင် ဆရာတော်ကြီးက မြင်းခြံ ဆရာတော် ဦးက၀ိအား မေးမြန်းပြောဆို စိစစ်ပုံကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။
ဖက်ပင်အိုင် ဆရာတော်ကြီးကား နာမည်ကျော် စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
မေး။.....။ စက္ခုနဲ့ ရူပါရုံ ပြိုင်သောအခါ စက္ခုက ရူပါရုံထံ သွားသလား၊ ရူပါရုံက စက္ခုထံ လာလေသလား။
ဖြေ။.....။ စက္ခုကလဲ မသွား၊ ရူပါရုံကလဲ မလာပါဘုရား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် ဘယ့်နှယ်မြင်နိုင်သတုံးဗျ။
ဖြေ။.....။ သူ့သတ္တိက ရှေးရူသောအခါ မြင်ခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်ပါ၏ဘုရား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် ရူပါရုံက လာတာပေါ့ဗျား။
ဖြေ။.....။ မလာပါဘုရား။ (ဥပမာ) နေကိုကြည့်သော သူသည် နေ၏ သတ္တိ အရောင်အလင်း မျက်စိကျိန်းခြင်းသာ ရှိပါ၏ ဘုရား။ နေ၀န်းကြီးက မျက်စိထဲ ၀င်လာသည် မဟုတ်ပါ။ မျက်စိကလည်း နေ၀န်းထဲ ၀င်သွားသည် မဟုတ်ပါ ဘုရား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် နေပါအုံးတော့ဗျာ၊ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း ပြောစမ်းပါ။
ဖြေ။.....။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘုရား (ဥပမာ) ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်သည် ၀ိပဿနာ အားထုတ်၍ စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်တရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းကို အလွန် ကြီးမားသော ဆင်းရဲကြီးဟု ငြီးငွေ့လျက် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းကို ရှာက တဏှာကို သိရသည်နှင့် တပြိုင်နက် မဂ် က ၄င်းတဏှာကို ပယ်လိုက်တော့ အကြောင်းအကျိုး ပြတ်သွားပါရော။ အဲဒီ ရှေးဦးစွာ မဂ်က မပယ်မီ ဖြစ်ပျက်နေတာ သင်္ခတ၊ နောက်တော့ အကြောင်းအကျိုး ပြတ်၍ ဘာမှ မရှိတာကတော့ "အသင်္ခတ-နိဗ္ဗာန်" ပါပဲဘုရား။
မေး။.....။ ၄င်းနိဗ္ဗာန်မှာ နေ၀န်းလ၀န်းများလို အရောင်တွေများ ရှိသလား။
ဖြေ။.....။ အရောင်တွေ မရှိပါဘုရား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် ဘယ့်နှယ်နေသတုံး ပြောစမ်းပါဗျာ။
ဖြေ။.....။ ပြောစရာ မရှိပါဘုရား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် နိဗ္ဗာန် မရှိဘူးလား။
မေး။.....။ စိတ်၊ စေတသိက်၊ ရုပ်၊ နိဗ္ဗာန် ရယ်လို့ ပရမတ် တရားလေးပါးရှိ မဟုတ်လားဗျ။
မေး။.....။ အဲဒီ ပရမတ်ပြောပါဗျား။
ဖြေ။.....။ ဆရာတော်ဘုရား၊ ဦးက၀ိက ပရမတ်ဆိုလျှင် ဘာမှ ပြောစရာမရှိ၊ လက်ပိုက် ထိုင်နေရုံပဲ။
မေး။.....။ နေစမ်းပါဦးဗျာ၊ ဟောဒီ ရွှေတုံးကြီးကို ခဲလို့ ပြောဆိုကာမျှဖြင့် ၄င်းရွှေတုံးကြီး ခဲဖြစ်သွားမှာလားဗျ ပြောစမ်းပါအုံး။
ဖြေ။.....။ ခဲမဖြစ်ပါဘုရား။ သို့သော်လည်း ပညတ် တရားကြီးလို ဒြဗ်ဝတ္ထုနှင့် ထင်ရှား မပြနိုင်ပါ။ နာမ် ရုပ်တို့၌ ဥပါဒ်၊ ဌီ ဘင် မရှိ၊ ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကို နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်တာပဲ။
မေး။.....။ ဥာဏ် ၁၀-ပါး ပွားများတာ ပြောစမ်းပါဗျာ။
ဖြေ။.....။ (ဥပမာ) ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်သည် အာနာပါနနှင့် သမာဓိ ရင့်သောအခါ မိမိ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဝေဒနာကို သတိနှင့် လိုက်ပါရော ဘုရား။ အဲဒါနှင့် ပထမကတော့ သညာအားဖြင့် ဝေဒနာ ပေါ်ပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်ခြင်း ဓမ္မကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မြင်ပါရော။ ဒါနဲ့ ကြောက်ခြင်း ရွံရှာခြင်း ဖြစ်ပါရော ဘုရား။
မေး။.....။ဥာဏ်၁၀-ပါးဟာ တစ်ခုစီ ပွားရမည် မဟုတ်လားဗျ။
ဖြေ။.....။ တစ်ခုစီ ပွားတာက ကိုယ့်အလိုပါ ဘုရား။
မေး။.....။ တစ်ခုစီ မပွားလျှင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မှာတုံးဗျ။
ဖြေ။.....။ သမ္မသနဥာဏ် သုံးသပ်ရုံမျှနှင့် ဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း ရွံ့ခြင်း စသည် ဖြစ်ပွားပါရော ဘုရား။
သုံးသပ်လိုက်တော့ ဖြစ်ပျက်တာက ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်
အေး ဟုတ်ပေတယ်ဗျ၊ ဟုတ်ပေတယ်။
မေး။.....။ ဦးက၀ိရဲ့- လောကမှာ ပညတ်အားဖြင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာလို့ ရှိကြမဟုတ်လား။
မေး။.....။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အစဉ်အတိုင်း တောက်လျှောက် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာလို့ တက်သွားသလား။
မေး။.....။ ဒါဖြင့် ဘယ်လို တက်ရတုံးဗျ။ တက်ပုံ ပြောစမ်းပါဗျာ။
ဖြေ။.....။ (ဥပမာ) ယောဂီပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဟာ သမ္မသနဥာဏ်ကို သုံးသပ်၍ ဥာဏ် ၁၀-ပါး ကုန်သွားပြီးနောက် ပညတ်အားဖြင့် ၄င်း ပုဂ္ဂိုလ်ကို သောတာပန် ဟု ခေါ်ကြပါတယ် ဘုရား။ ၄င်းနောက် သမ္မသနဥာဏ်ကို သုံးသပ်အုံး၊ ဥာဏ်၁၀-ပါး ကုန်ပြန်က သကဒါဂါမ် လို့ ခေါ်ကြပါတယ် ဘုရား။ ဤကဲ့သို့ လေးကြိမ်တက်က ရဟန္တာ လို့ ခေါ်ကြပါတယ် ဘုရား။
Posted by Kyaw81 at 8:17 PM0comments
သပိတ်အိုင် တောရဆရာတော်၏တရား အနှစ်သာရများ
သပိတ်အိုင် တောရဆရာတော်သည် သီမာကောသလ’ကျမ်းငယ် တစ်စောင်ပြုစုခဲ့၏။ ၎င်းပြင် ယောဂီနန္ဒီခေါ် "စူဠသောတာပန်ဖြစ်ခန်း ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်း" ကျမ်းကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်နှင့် ထိမိလှသော ကျမ်းဖြစ်၏။
ဆရာတော် ဟောပြောဆုံးမလေ့ရှိသော တရားများကို လူအများ တောင်းပန်၍ စာအုပ်အဖြစ် ရေးသားချီးမြှင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဆရာတော် အဘယ်တရားကို အဘယ်သို့ နှလုံးသွင်း၍ ပေါက်မြောက်သနည်း" ဟူသော အမေး၏ အဖြေလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကပင် ဆရာတော်၏ ပရိယတ်, ပဋိပတ်,ပဋိဝေဓကို ညွှန်ပြနေသည်။ဓာတ်ခွဲမှုနှင့် အာနာပါနကို လူပြိန်းနားလည်အောင် ကျမ်းဂန်သာဓက ပြ၍ ရေးထားသည်။
၀ိပဿနာ အလုပ်နှင့်စပ်၍ အရေးတကြီး သိမှတ်ဖွယ်များအတွက် ထိုကျမ်းငယ်သည် အထိုက် အလျောက်လုံလောက်၏။ ကျမ်းဂန်နှင့်လာသော အဓိပ္ပာယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်သဘောပေါက် သော အဓိပ္ပာယ်များကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရေးထားသည်။
ထိုကျမ်းမှ ရေးသားချက်အချို့ကို အနည်းငယ် ထုတ်ပြပါဦးအံ့။
"သောတာပန်နှင့် သကဒါဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အနတ္တ အချက်ကို အစွမ်းကုန် ထင်မြင်သည်။ အနိစ္စ အချက်နှင့် ဒုက္ခအချက်ကို အစွမ်းကုန် မထင်မြင်နိုင်။"
"အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အနတ္တအချက်နှင့် အနိစ္စအချက်ကို အစွမ်းကုန် ထင်မြင်သည်။ ဒုက္ခ
အချက်ကို အစွမ်းကုန် မထင်မြင်နိုင်။"
"ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် သုံးပါးလုံးကို အစွမ်းကုန် ထင်မြင်နိုင်သည်။"
တရားဆိုသည်ကား သမထတရားပင် ဖြစ်စေ၊ ၀ိပဿတရားပင် ဖြစ်စေ သဘောအကျဆုံး၊ စိတ်ဥာဏ်အရှင်းဆုံးဖြစ်သော တရားတစ်ခုခုကိုသာ ရှာကြံ၍ မိမိရရ တစ်သက်ပတ်လုံး အားထုတ်ရာသည်။
ဟိုတရားက ကောင်းလိမ့်ထင့်၊ ဒီတရားက ကောင်းလိမ့်ထင့်၊ ဟိုတရားကို အားထုတ်လိုက် ဦးမှ၊ ဒီတရားကို အားထုတ်လိုက်ဦးမှ စသည်ဖြင့် ဓမ္မ၀ိတက် ဖြစ်တတ်ကြသည်။ အဆုံးသတ်လိုက်တော့ ဟိုတရားကိုလဲမိမိရရ မရှိ၊ ဒီတရားကိုလဲ မိမိရရ မရှိ၊ ဟိုလိုလို သည်လိုလိုနှင့်အချိန်ကုန်တတ်ကြ သည်
အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ၀ိတက်စရိုက် ပြောသူနှင့် သင့်လျော်၏ ဟု ပြဆိုသော်လည်း ၀ိတက်စရိုက် မပြောသောသူတို့မှာမူ သာ၍ပင်သင့်လျော်သေး၏။ စရိုက် ပဓာနမဟုတ်။
စိတ်ဥာဏ်ရှင်းလင်း၍ ထင်လွယ်၊ မြင်လွယ်၊ သိလွယ်သည်သာလျှင် ပဓာန ဖြစ်၏။
နိမိတ် အစစ် အတု
စိတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌မနေဘဲ အာရုံရှိရာသို့ သွားလာ၍ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ကြံစည် စဉ်းစား၍ ထင်ခြင်းသည် နိမိတ်အစစ်မဟုတ်
စိတ်ရှိရာသို့ အာရုံက လာရိုက်၍ ထင်စေရမည်
ဥပမာကား ဓာတ်ပုံရိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်စေရမည်။ စိတ်ကား ဓာတ်မှန်ကဲ့သို့ တည်စေရမည်။ အာရုံကား အရိပ်အရောင်ကဲ့သို့ ရိုက်၍ ထင်စေရမည်။ ဤကဲ့သို့ ထင်စေမှသာလျှင် နိမိတ်အစစ် ဖြစ်မည်။
ဈာန်ရလျှင် ကောင်းကင်သို့ ပျံနိုင်သည်ဟု တစ်ထစ်ချ မှတ်ယူတတ်ကြကုန်၏။ ပ၊ ဒု၊ တ၊ စ
ဈာန်ကို ရရုံမျှဖြင့် ကောင်းကင်သို့ မပျံနိုင်
ပဉ္စဈာန်သည် သက်သက်သော ပဉ္စမဈာန်၊ အဘိညာဉ်ကိစ္စ တပ်သော ပဉ္စမ ဈာန်အားဖြင့် နှစ်ပါးရှိ သည်တွင် ဣဒ္ဓိဝိဓ အဘိညာဉ်ကိစ္စတပ်သော ပဉ္စမဈာန်မှသာလျှင် လိုရာအရပ်သို့ ပျံသန်းနိုင်သည်။
ကိုယ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူရှင်အများတို့ ထင်မြင်အောင် ပျံသွားခြင်း တစ်မျိုး၊ လူရှင် အများတို့
မထင်မမြင်နိုင်ဘဲ ခဏတစ်ဖြုတ် ရုတ်တရက် လျင်မြန်စွာ မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပြက် စိတ္တက္ခဏ အတွင်းမှာပင်လျှင် လိုရာအရပ်သို့ ပျံသွားခြင်း တစ်မျိုးအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိသည်။
ရုပ်မှန်း၊ နာမ်မှန်း၊ အနိစ္စအချက်မှန်း၊ ဒုက္ခအချက်မှန်း၊ အနတ္တအချက်မှန်း မသိဘဲလျက် ထွက်သက် လေ၊ ၀င်သက်လေကိုသာ အာရုံပြု၍ မှတ်နေလျှင် သမထပင် ဖြစ်သည်။
ရုပ်မှန်းအနတ္တ အချက်မှန်း သိလျက် ထိုရုပ်နာမ်တို့၏ အဖြစ်အပျက်ကို လက္ခဏာတင်၍ သုံးသပ် ပါမူ ၀ိပဿနာ ဖြစ်လေတော့၏။
နားမလည်လျှင် သီသီကလေးနှင့် တစ်သက်လုံး လွဲချော်တတ်၏။
ထွက်သက်လေနှင့် ၀င်သက်လေတို့သည် ၀ါယောဓာတ်ဟု ဆိုရသော်လည်း ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇောဓာတ်တို့လည်း ပါမြဲဖြစ်လေသည်။
ထွက်သက်လေမဟာဘုတ်နှင့် ၀င်သက်လေ မဟာဘုတ်သည် ရုပ်၊ ထွက်မှန်းသိသော စိတ်သည် နာမ်။ (လေ၊ခံစားမှု၊မှတ်သားမှု၊ စေ့ဆော်မှု၊ သိမှု- ခန္ဓာငါးပါးနှင့်လည်း ခွဲပြထားသည်။)
စိတ်ဥာဏ်က ( အစ-အလယ်-အဆုံး ) မလိုက်နိုင်မူ-
အ၀င်၌ အဖြစ် တစ်ချက်တည်းကိုဖမ်း။
အထွက်၌ အပျက် တစ်ချက်တည်းကိုဖမ်း။
အဖြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ အပျက်ကိုဖြစ်စေ တစ်ချက်ချက်မိလျှင် မဂ်ကိစ္စ ပြီးနိုင်သည်။ အရေးကြီးသော အချက်၊ ကောင်းစွာမှတ်။
ရုပ်နာမ်တရားတို့သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ တစ်ဆံဖျားမျှ ရွှေ့ပြောင်းသည်ဟူ၍ မရှိ။ တစ်နေရာတည်း၌ပင် ဖြစ်၍ ပျက်ကြရကုန်၏။
"ဝေဒနာလိုက်" ဟု ဆိုသော်လည်း
နာမ်တရားဟူသမျှတို့တွင် ဝေဒနာသည် အထင်အရှားဆုံး၊ အသိလွယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ဝေဒနာတရား နှင့် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူကြသည်ကား များစွာရှိကုန်၏။ မိမိတို့၏ ကိုယ်ကို ဒွိဟိတ်မှန်း တိဟိတ်မှန်း ဧကန်မသိသေးဘဲလျက် ဂေါဓိကရဟန်း ကို အားကျ၍ လည်ပင်းကို ဖြတ်သည်ရှိသော် လည်ပြတ်ရုံသာ ရှိလိမ့်မည်။
ဝေဒနာတရား ငါးပါးတို့တွင်လည်း ဒုက္ခဝေဒနာသည် အသိလွယ်ဆုံး၊ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်သည်။
နည်းနည်းညောင်းလျှင် နည်းနည်းထင်ရှား၏။ များများညောင်းလျှင် များများထင်ရှားသည်။ ညောင်းညာပါစေ၊ ထုံကျဉ်ပါစေ၊ ကိုက်ခဲပါစေ၊ ယိမ်းယိုင်ပါစေဟူ၍ ဘယ်အခါမျှ နှလုံ မသွင်း အပ်။ဝေဒနာဖုံးနေသည်။
ညောင်းအားကြီးလွန်းလျှင် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အညောင်းလွန်သော် စိတ်ပျံ့လွင့်၍ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်ကိုပင် အကောင်း ထင်မှတ် ကြသေး၏။ မထင်မှတ် အပ်။
ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ရှေ့ကနေ၍ လွဲနေလျှင် နောက်ကလိုက်သော ယောဂီတွေ အကုန်လွဲကုန် ၏။ ညောင်းညာ ထုံကျဉ် ကိုက်ခဲ၍ လာသောအခါ သူ့အလိုလို ယိမ်းယိုင် လာတတ်သည်။ ထ၍ပင်ခုန်တတ်သေးသည်။ အကောင်းမဟုတ်၊ စိတ်ကိုမလွှတ်ရာ။ ကြာလျှင် အရူးကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်၏။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ကိုပင် သမာဓိ မှတ်ထင်တတ်သေးသည်။
စိတ်ဥာဏ်က လိုက်နိုင်ပါမူ တစ်ကိုယ်လုံး၌ ပျံ့နှံ့၍ သွားသည်တို့ကို ထင်မြင်အောင် နှလုံးသွင်း အပ်၏။ မိုးတိမ်များ လေသင့်ရာသို့ ရေးရေး ရေးရေးနှင့် သွားနေသကဲ့သို့ အသစ်အဟောင်း ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲ၍ ဖြစ်ပျက်၍ ဖြစ်ပျက်၍ သွားသည်တို့ကို အာရုံစူးစိုက်၍ နှလုံးသွင်း နိုင်လျှင်လက္ခဏာ အထူးတင်နေရန် မလိုတော့ချေ။ တင်ပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။
Posted by Kyaw81 at 8:50 AM0comments
Posted by Kyaw81 at 8:29 AM0comments
ဘုရားရှင်အဆူဆူလည်း ဤ ဒေ၀ဒူတသုတ္တန်ကို ဟောတော်မူမြဲပင် ဖြစ်ပလေတော့သတည်း ။
Posted by Kyaw81 at 8:07 AM0comments
သမ္မာဒိဋ္ဌိတွင်(၁) ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ(၂) ၀ိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိ (၃) မဂ္ဂသမ္မာဒိဋ္ဌိ (၄) ဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိ (၅)ပစ္စဝေက္ခဏာသမ္မာဒိဋ္ဌိ
ဟူ၍ ငါးမျိုးရှိပါသည်။ ယင်းငါးမျိုးတွင် ၁) ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသည်
မြင့်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိလေးမျိုးကို အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်သွားနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုခံယူ
လိုသော် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အားဖြင့် ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ၌သက်ဝင်ဖို့
လိုပေမည်။ ယင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိ၌မျှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်သက်ဝင်မှု
မရှိလျှင် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဟူသည် မိမိပြုလုပ်သော စေတနာကောင်းကံ ၊
မကောင်းကံ၏ အကြောင်းအလိုက် ထိုက်တန်သလောက် ဖြစ်ပေါ်ခံစားသည်
ဟူ၍ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ မိမိ၏ အလုပ်(ကံ)နှင့် ကံကြောင့်ရသော လုပ်ခခေါ်
သည့် ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ကောင်းသောအမှုလုပ်လျှင်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပြီး ၊ မကောင်းမှုလုပ်လျှင် မကောင်းကျိုး ဆင်းရဲဒုက္ခ
ရရှိမည်ဟု မုချယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ၏။ လူသား၏ ကံကြမ္မာကို ထိုလူ၏
"အလုပ်"၊"အကျင့်စရိုက်" ကသာဖန်တီး၍ အခြားမည်သည့်အရာကမျှ မဖန်တီးနိုင်
ဟုလည်း ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ စွဲစွဲနစ်နစ် ယုံကြည်သက်ဝင်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဤ ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့်
ဆန့်ကျင်သော အယူအစွဲတို့၌ မွေ့လျော်သက်ဝင်နေမိခြင်းရှိမရှိ မိမိကိုယ်ကို
ဗြဟ္မဏတို့၏ ဝေဒကျမ်းလာ "ပြဿဒါး"၊"ရက်ရာဇာ"၊"၀ါရမိတ္တူ"၊
"နဂါးလှည့်" စသော အယူများသည် ကမ္မသကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် ဆန့်ကျင်သော
"အယူမှား" ၊ "အစွဲမှား" များဖြစ်၍ ယင်းအယူအစွဲမှားများ၌ယုံကြည်သူသည်
မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ သမ္မာဒိဋ္ဌိ မဖြစ်နိုင်ပါပေ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏
နမ္မားဆရာတော်ကြီး အရှင်ဉာဏက ရက်ရာဇာ ပြဿဒါးတို့နှင့် ပတ်သက်၍
ပြက်ပြက်ထင်ထင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဝေဖန်ခွဲခြား စိစစ်တော်မူခဲ့သည်။
ရက်ရာဇာ ပြဿဒါး အယူစွဲ၍ အလွဲမွေ့လျော်သက်ဝင်သူများ ဆင်ခြင်
တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ဆိုတာ
"မောင်စိန်ရေ၊ တနင်္ဂနွေ တနင်္လာဆိုတာ ပူသလား အေးသလား"
"သဘောတရားမရှိရင် ပညတ်ပေါ့၊ အဟုတ်ရှိ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွဲ့"
"အဲဒီ အဟုတ်ရှိမဟုတ်တဲ့ ပညတ်တွေကို အဟုတ်ရှိထင်ပြီး ပြဿဒါးကို
ကြောက်ရ၊ ရက်ရာဇာကို အားကိုးရနဲ့ ပုထုဇဉ်တွေမှာ မောပြီး ဒုက္ခ
"မှန်ပါ့၊ ဒုက္ခဖြစ်နေကြပါတယ် ဘုရား"
"ပြဿဒါးနေ့မှာ ထန်းလျက်ခဲကိုစားရင် မချိုဘူးလား"
"ကုသိုလ်ကံသည် အကျိုးပေးခွင့်ရသော်လည်း ပြဿဒါးနေ့မှာ အကျိုးမပေးသေးဘဲ
"ဒီလိုဆိုရင် ကံကောင်းထောက်ပံ့နေသောသူသည် ပြဿဒါးနေ့မှာ အိမ်တိုင်ထူ
"ဒီလိုဆိုရင် ကံကောင်းထောက်ပံ့နေသောသူသည် အကုသိုလ်ကိုသာ ကြောက်
"အဲဒါကြောင့် အကုသိုလ်ကို မကြောက်ဘဲ ပြဿဒါးကိုကြောက်လျှင် ဗြဟ္မဏ
ဘာသာ၊ ပြဿဒါးကို မကြောက် အကုသိုလ်ကိုကြောက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ
"ရက်ရာဇာနေ့မှာ ငရုတ်သီးစားရင် မစပ်ဘူးလား"
"ရက်ရာဇာနေ့မှာလုပ်သော အကုသိုလ်သည် မကောင်းကျိုးကို မပေးဘဲ
"၄င်းအိမ်ခြေတစ်ရာမှာ ရက်မရွေးဘဲ ဆောက်တဲ့အိမ်ပါရဲ့လား"
"ရက်ရွေးပြီးဆောက်တဲ့အိမ်တွေသည် ချမ်းသာတဲ့ အိမ်တွေချည်းပဲလား"
"ဒီလိုဆိုရင် ရက်ကောင်းတွေက ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သလား"
"ရက်မရွေးဘဲ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ လင်မယားရှိရဲ့လား"
"လင်မယားတိုင်း မကွဲမကွာနဲ့ ချမ်းသာတာချည်းပဲလား"
"ရက်ကောင်းတွေကို အားကိုးရတာ အလကားပေါ့"
"ကုသိုလ်ကို အားကိုးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာကွဲ့ မောင်စိန်ရဲ့"
တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော စေတနာအလျောက် ခံစားရသည့် တုံ့ပြန်မှုသာလျှင်ဖြစ်ပါ၏။
ကောင်းသောလောကဓံတရားများသည် လူသား၏ စိတ်အစဉ်တွင် ဖြစ်ထွန်း
သည့် မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာတရားများ၏ ထုထည်ပမာဏနှင့်
လျော်ညီထိုက်တန်စွာ ခံစားရသည့် အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ပါ၏။ ယင်းသည် တရား
မျှတသော ကမ္မနိယာမဖြစ်ပါ၏။ ဤကမ္မနိယာမကို ကပြောင်းကပြန်
တော်လှန်နိုင်သော တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ရှင်ဟူ၍ ဤကမ္ဘာ၌မရှိ။
ရက်ရာဇာ ပြဿဒါး ၀ါရမိတ္တုတို့က စွမ်းနိုင်သောအရာလည်း မဟုတ်။
ကိလေသာတန်းလန်း ၊ အာသဝေါတရားများ ထွေးလုံးရစ်ပတ်နေသောဗြဟ္မဏ
ပုဏ္ဏားတို့၏ "ရက်ရာဇာ" "ပြဿဒါး"ဟူသော အယူသည် ကမ္မနိယာမနှင့်
ဆန့်ကျင်ခြားနားသော အယူမှား ၊ အစွဲမှားသာဖြစ်ပါ၏။
ယင်းရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါး အယူမှား အစွဲမှားတွင် သက်ဝင်ယုံကြည်နေသူများ
အနေဖြင့် အမှားကိုပြင် နိုင်စေရန် စေတနာဖြင့် အောက်ပါ စာပိုဒ်ကို
အမှားအမှန်ကို တိကျစွာ သိရန်ခဲယဉ်း၏။
အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ခွဲခြား၍ ပြောခဲ၏။
အမှားကို ပယ်၍ အမှန်ကိုပြုလုပ်ခဲ၏။
ထိုခဲယဉ်းခြင်းလေးမျိုးတို့ကမှ လွတ်မြောက်အောင် အထူးအားထုတ်သင့်၏}}
( အရှင်သေဋ္ဌိလာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရားကြီး )
Happyvalley ရေးသားသော Myanmar cupid မှကောက်နုတ်တင်ပြထားပါသည်။
Posted by Kyaw81 at 9:52 PM0comments
သစ္စာအနက်၁၆ချက် ( )
အမေးအဖြေ ( )
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္မဌာန်းသံပေါက် လင်္ကာမျာ...
Venerable Mahagandaryon Sayadaw
ပခုက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒောဘာသ မဟာထေရ်
America Myanmar Buddhist(နယူးယောက်)
ကသစ်ဝိုင် ၀ိပဿနာ(အောင်မင်းခေါင် ကုန်းမြေ)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ တိသရဏ ၀ိဟာရ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း
Religion in Myanmar Blogger Society
"သေမင်းမမြင်နိုင်အောင် ရုပ်နာမ်လောကကြီးကို သုညတဆိုက်အောင်ရှုကြပါ။ "